Bozaka artifisialy, bozaka artifisialy, ahitra sintetika - DEDGE
Nahoana no DEGE
Tantara & Kolontsaina
Ny gorodona Spc
Flooring Laminate Glossy avo
Laminate gorodona maivana sy maizina
Laminate gorodona tsy tantera-drano
Vato Vinyl Flooring
Flooring Classic Engineered
Taila karipetra vaovao
Decking & taila
Rindrina Bamboo anatiny
Rindrina Bamboo ivelany
Wpc tsipika haingon-trano
DEGE dia mpamatsy tokana ny vahaolana amin'ny gorodona sy rindrina.
Naorina tao Changzhou City, Jiangsu Province tamin'ny 2008, mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana sy ny fivarotana ny Flooring sy ny rindrina fitaovana.
Molding Mdf tsara kalitao ho an'ny Fl...
Hazo artifisialy maitso voajanahary 30mm
4mm gorodona Vinyl tsara indrindra
Fitaovana ivelany Wpc Panel Cladding 219.28mm
100% tsy tantera-drano efitra fandroana rindrina rindrina Cladding ...
INONA NO TOMBON'NY SPC FLOORING?
Ny gorodona SPC dia manome endrika tsara ny gorodona hazo mafy, tsy misy fikojakojana.Izany no hoavin'ny gorodona;mahagaga, loko voajanahary, mifanaraka amin'ny faharetan'ny gorodona laminate sy vinyl.Androany dia hampiditra tombony vitsivitsy amin'ny SPC Flooring toy izao manaraka izao: Highly Water Resistant P...
Inona ny gorodona WPC, SPC ary LVT?
Ny indostrian'ny gorodona dia nivoatra haingana be tato anatin'ny folo taona lasa, ary nipoitra ny karazana gorodona vaovao, amin'izao fotoana izao, ny gorodona SPC, ny gorodona WPC ary ny gorodona LVT dia malaza eny an-tsena. Andeha hojerentsika ny fahasamihafana misy eo amin'ireo karazana gorodona vaovao telo ireo. .Inona no atao hoe LVT Flooring?LVT (Lu...
Ahoana ny fomba hanovana haingana ny tranonao amin'ny gorodona SPC?
Ny gorodona SPC dia fitaovana gorodona maivana sy ara-tontolo iainana, izay mety indrindra amin'ny fanavaozana ny gorodona taloha.Raha mbola miorina tsara sy fisaka ny gorodona tany am-boalohany, dia azo rakofana mivantana, mampihena ny fahalotoan'ny haingon-trano ary mampihena ny fampiasana fitaovana haingon-trano, manome ...
Ahoana ny fanadiovana ny gorodona SPC anao?
Torohevitra amin'ny fanadiovana ny gorodona SPC Ny fomba tsara indrindra hanadiovana ny gorodona SPC dia ny fampiasana kifafa misy volo malefaka mba hanesorana ny loto.Ny gorodona SPC dia tokony hofafana na hosorina tsy tapaka mba hitazonana azy ireo ho madio sy hisorohana ny fanangonana loto sy vovoka.Ho an'ny fikarakarana isan'andro ankoatry ny famafazana maina na vacuumi...